I-Eagle's Nest, ikhabhathi epholileyo eneembono eziphefumlayo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLeigh
Ngaba ufuna ukutshaja kwakhona? I-Eagle's Nest ibonelela ngeyona ndlela yokuphumla. Ithe ntsho kancinane ehlathini, ifihliwe
Indlela, ungahlala kwaye ukonwabele iimbono ezimangalisayo ukusuka kwigumbi ngalinye lendlwana. Relax ngekomityi yekofu ejikeleze umngxuma womlilo, okanye ungene kwitubhu yakho yabucala yangaphandle eshushu ejonge echibini. Ukunyuka okufutshane kwindlela entle ejikeleza ihlathi kwaye uya kulufumana unxweme! Sikubonelela ngayo yonke into oyifunayo ngeholide yokuphumla-kwaye sinobubele kwizilwanyana zasekhaya!
INdlwane yoKhozi yindawo ekhethekileyo kuthi. Ikhabhinethi yethu epholileyo ibuyela kumhlaba wesithsaba ngoko kukho ukuhamba okuninzi kunye neendlela zokuhamba ezifumanekayo, kodwa kukuhamba ngemizuzu emi-6 kuphela ukuya kumbindi wedolophu. Ikhaya lethu elihle kunye nelanamhlanje lijonge i-Shuswap Lake kunye nentaba yeCrowfoot. Sinobubele kakhulu kwisilwanyana sasekhaya ngoko ke nceda uze nomntwana wakho onoboya kunye nawe! Ikhabhinethi inendawo entsha kraca, epholileyo, etshisa iinkuni, ibhafu yakudala, iTV yescreen esicaba kunye neNetflix, i-BBQ yangaphandle, umsi wangaphandle, umgodi omkhulu womlilo onezihlalo, imidlalo, iingubo ezongezelelweyo kobo busuku bechilli, kwaye ngokuqinisekileyo a. ikhitshi egcwele ngokupheleleyo! Siphinde sibe nolwandle olunee-kayak ezine zeendwendwe ezisetyenziselwa (i-2 yabantu abadala, i-2 yabantwana) Olu lunxweme ekwabelwana ngalo nathi kodwa senza konke okusemandleni ethu ukuhlonipha ubumfihlo bakho. NCEDA UQAPHELE - kwiinyanga zikaMeyi ukuya phakathi kukaJulayi akunakubakho naluphi na ulwandle ngenxa yamanzi amaninzi.
Sihlala phezulu kwipropathi kwaye sisondele ngokwaneleyo ukuba ufuna nantoni na okanye unayo nayiphi na ingxaki. Ukufikelela elunxwemeni uya kufuna umgangatho wokuqina komzimba njengoko kukho izinyuko ezimbalwa kunye nokunyuka okuthile. Ungaqhuba ezantsi kwaye upake ecaleni kwendlela, yile nto siyenzayo :)
4.97 · Izimvo eziyi-116
I-Eagle Bay yindawo entle, ezolile eShuswap Lake, eBritish Columbia. Ibekwe kwiiyure ezi-4.5 ukusuka eVancouver kunye neeyure ezi-6 ukusuka eCalgary, ibekwe phakathi kweentaba kunye neentlambo, yiparadesi yabathandi bendalo! I-Eagle Bay ikwi-Blind Bay edlulileyo kwaye yimizuzu esi-8 kuphela ukuya kwidolophu yaseSorrento. Ifanelekile ukukhwela isikhephe, ukukhempisha, ukuqubha, ukuhamba ngekhephu, kunye nokubona indawo, inokuninzi onokuyinika. Amanzi kunye nolwandle e-Eagle Bay amhlophe kwaye acwengile kwaye azolile ngokubanzi kunezinye iindawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Leigh
Sonke simalunga nokuhlonipha ubumfihlo kwaye sinxibelelana neendwendwe zethu kuphela xa zisibuza. Sihlala kwipropathi ephezulu kwindlela yokungena, kwaye ikhabhathi isezantsi kwendlela yokungena. Sinelebhu enobubele kakhulu, emthubi egama linguTyler sithanda ukuya ezantsi elunxwemeni ukuze sonwabele ukuqubha okumnandi ngeentsuku ezishushu :)
Sonke simalunga nokuhlonipha ubumfihlo kwaye sinxibelelana neendwendwe zethu kuphela xa zisibuza. Sihlala kwipropathi ephezulu kwindlela yokungena, kwaye ikhabhathi isezantsi kwend…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Blind Bay